Madaxweynaha Puntland oo Garowe ku qaabilay safiirka Sweden ee Soomaaliya – Kalfadhi
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulahi Deni ayaa maanta madaxtooyada Garowe ku qaabilsay safiirka dowladda Sweden ee Soomaaliya Amb. Andreas Von Vexkull iyo saraakiil ka socda hay’ada Diakonia Sweden oo mudo 25 sano ah ka hawlgelaysay Puntland.
Madaxweyne Deni ayaa sheegay in uu safiirka kala hadlay arimo dhawr ah oo ay ka mid tahay kaalmada Sweden ee Soomaaliya gaar ahaan marka ay timaado Puntland in ay ka filayaan in ay gacan ka geystaan dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhismaha.
Booqashada safiirka uu ku tegay Puntland ayaa salka ku haysa ka qaybgalka munaasabada 25 sano guurada ka soo wareegtay markii hay’adda Diakonia ay ka hawl bilawday Soomaaliya, khaasatan magaalada Garowe oo ay ku leedahay xafiis taageera waxbarashada, arrimaha haweenka, xuquuqda Aadanaha iyo dimuqraadiyadda.
Munaasabada ayaa Beri la filayaa in ay ka dhacdo Garowe
Xildhibaan Boqore oo maanta lagu aasay Muqdisho iyo Taariikh Nololeedkiisa